Midea Air Cooler AC120-15F (Blue) ~ ICT.com.mm
HomeMidea Air Cooler AC120-15F (Blue)
Midea Air Cooler AC120-15F (Blue)
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်ကို သက်သာစေမဲ့ Midea အမှတ်တံဆိပ် Air Cooler AC120-15F (အပြာရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတဲ့လေပြည်လေညင်းကို 410m3/hr လေစီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းနဲ့ မိမိရဲ့အခန်းတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခန်းတွင်းမှာ အလျင်အမြန်အေးမြစေရန်အတွက် Ultra Turbine ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် ယခင်မျိုးဆက် Air Cooler တွေထက် လေစီးဆင်းမှုအရည်အသွေး ပိုမိုသာလွန်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ရေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း အအေးဓာတ် ပိုမိုမြင့်မားချင်ရင်တော့... [Learn more]
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်ကို သက်သာစေမဲ့ Midea အမှတ်တံဆိပ် Air Cooler AC120-15F (အပြာရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတဲ့လေပြည်လေညင်းကို 410m3/hr လေစီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းနဲ့ မိမိရဲ့အခန်းတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခန်းတွင်းမှာ အလျင်အမြန်အေးမြစေရန်အတွက် Ultra Turbine ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် ယခင်မျိုးဆက် Air Cooler တွေထက် လေစီးဆင်းမှုအရည်အသွေး ပိုမိုသာလွန်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ရေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း အအေးဓာတ် ပိုမိုမြင့်မားချင်ရင်တော့ ရေခဲကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ သာမန်ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ရေ/ရေခဲထည့်ကန် ပါဝင်ပြီး ဆံဝင့်မှုပမာဏကတော့ (၁၅)လီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကန်အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့အတွက် (၁၀) နာရီအထိ ရေထပ်ဖြည့်စရာမလိုဘဲ တောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပန်ကာလည်ပတ်တဲ့ အမြန်နှုန်း (၃)မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာအမြန်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Air Cooler ကို Remote Control နဲ့လည်း ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (၇)နာရီအထိ အသုံးပြုချိန် သတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့7Hour Timer Setting ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ကြာချိန်အလိုက် Timer နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်တာကြောင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို ချွေတာနိုင်စေသလို ညဘက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အလွန်အမင်း အေးမြနေတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Ultra turbine: This new generation of air cooler is able to carry out the cooling function even further than before, Ice Boost: Need stronger cooling? You only need to add ice and you will be able to enjoy more comfort inashort amount of time, Extra Large Tank: Extra large tank increases comfort by increasing operating time up to 10 hours before the next refill.
Air Flow (m3/h): 410
Ultra Turbine for stronger airflow
Ice Boost for extra cooling
Extra Big Tank for 10hrs runtime
Width x Depth x Height (mm): 390 x 350.x 705(mm)